“Qaab ciyaareedka cajiibka uu sameenayo Rashford, waxay muujineysaa sida uu fashil u yahay Mourinho” – Gool FM
(Manchester) 04 Feb 2019. Marcus Rashford ayaa ka hoos sameenaya qaab ciyaareed aad u fiican la shaqeynta macalinka ku meel gaarka ah kooxda Manchester United ee Ole Gunnar Solskjær.
Da’ayarka reer England ayaa ku hogaamiyay shalay kooxdiisa Manchester United in ay guul muhiim ah ka gaarto dhigeeda Leicester City, kadib markii uu dhaliyay goolka qura ee ciyaartan ka dhashay, xili kulankan uu ku soo idlaaday 1-0.
Kadib markii uu ku dhaleeceeyay tababarihii hore United-ka ee Jose Mourinho, laacibkan Rashford awoodiisa ciyaareed, ayuu Solskjær isbarbar-dhig ku sameeyay xidigaha Rashford iyo Cristiano Ronaldo, iyadoo cadaadiska weeraryahankan da’ada yar uu ahaa, sida uu sare ugu qaadi lahaa qaab ciyaareedkiisa.
“Waxay ahayd arrin cajiib ah, wiilku si fiican ayuu u fiicnaanayaa, Pogba iyo Rashford wuxuu midba midka kale ka dhigaa inuu fiican yahay”.
Kadib markii uu ku dhaliyay 3 gool ee horyaalka Premier League ah la shaqeynta Jose Mourinho, wuxuu awooday Rashford in 6 gool uu ku dhaliyo ka hoos shaqeynta tababare Solskjær 8-dii kulan ee ugu dambeysay.
Laga yaabee bandhiga cajiibka ah uu ka hoos sameenayo Marcus Rashford tababare Solskjær in ay tooshka ku ifiso sida uu ugu fashilmay macalinkii hore kooxda Manchester United ee Jose Mourinho, inuu ka soo saaro weeraryahanka heerka caalami ee dalka England Marcus Rashford, heerkiisa ugu sareeya ee ma ahan in wax qabadkiisa uu liito.
Rashford ayaa cel celis ahaan sameyn jiray kulankiiba 2 shuut xiligii Mourinho, laakiin marka uu baxay tababaraha reer Portugal wuxuu celcelis ahaan gaaray inuu sameeyo 5 shuut 90-kii daqiiqoba kulamada horyaalka Premier League.
EEG: Kala Sarreynta Premier League tan iyo sidii loo ceyriyay Mourinho.....(Man United oo hogaanka heysa halka Liverpool iyo City laga riday 3-aad iyo 4-aad)